Kordhinta ArcView 3x - Gofumed
Janaayo, 2008 ArcGIS-ESRI, Downloads
Inkastoo ArcView 3x uu yahay nuqul asal ah, weli wali waxaa loo adeegsanayaa macaamiishii ugu badnaa ee isticmaalka maabka, faylka muuqaalka inkastoo xitaa faylka 16 ee faylasha ayaa weli isticmaala barnaamijyo badan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay jiilkan ku heleen waxay ahayd shaqeynta ah soo dejinta balaarinta ee ulaha culus ee qallafsanaanta noocaan ah iyada oo aan la'aanta xakamaynta topological.
Si kastaba ha ahaatee ma diidi karno in waqtigaa uu ahaa kii ugu fiicnaa ee uu jiray, waxa uu ku faafay qaabka maamulka ee xogta juqraafi iyo xitaa, barnaamijyo badan oo maanta jira waxay ku saleysan yihiin farsamooyinka ay horseedday ArcView. Halkan waxaa ku qoran liis dheer oo ku saabsan kordhinta ay bixiso Jeff Jenness:
Fidiyo bilaash ah oo loogu talagalay ArcView 3.x
Extension ArcView Extensions for Management Vector
Hababka Hawlaha Xayawaanka ee Kale, v. 2.1 Waxay falanqaynaysaa waddada suurogalka ah ee dhaqdhaqaaqa xayawaanka ku salaysan dabeecadaha qaarkood ee deegaanka
Qalabka / Qalabka Azimuth, v. 1.6 Qalabkani wuxuu bixiyaa doorashooyin lagu abuurayo dariiqooyinka kala duwan ee wadooyinka iyo fogaanta gacanta ama qaabka qaabka
Fogaanta iyo Casimuth Matrix, v. 2.1 Iyada oo la kordhinayo waxaad ku abuuri kartaa jadwal ku jira qaabka sawirka iyo masaafooyinka sheyga oo u diri qaabab kala duwan sida Excel ama qoraalka kala tagsan
Xarunta Mass., V. 1.b Si aad u heshid qaybta hoose ee shayga
Meelaha loo yaqaan Convex Hulls ee dhibcaha, v. 1.23 Waxay u badashaa walxo badan oo leh tiro isku dhafan oo leh sifooyin caadi ah
Fog / Casimood u dhexeeya Noocyada Isku Habeeya, v. 2.1 Wuxuu abuuraa jadwalka jihooyinka iyo masaafada u dhexeeya walxaha wadaago sifooyinka caadiga ah
Aqoonsiga Noocyada Fogaanta Aqoonsiga walxaha ku jira gudaha ama meel fog
Qadka ugu Hooseeysa, v. 1.3a Masaafada ugu dheer ee shayga
Qaababka ugu dhow, v. 3.8b Qalabka ugu dhow ee sifooyinka qaarkood
Jidka, leh Meelaha iyo Rukunka, v. 3.2b Xisaabinta masaafada iyo wadida adigoo abuuraya waddo u dhaxeysa walxaha la qeexay
Xoojinta Laynaha iyo dhibcaha v. 1.1 In la abuuro xariiqyo xagjir ah oo laga soo bilaabo barta
Random Point Generator v. 1.3 Waxay abuureysaa qodobo khayaali ah oo ka mid ah raadiye qeexan
Soo celinta qaababka Waxay dhalisaa walxaha ku celceliska
Miisaanka Calaamadsan ee dhibcaha v. 1.2c Isku-dhajinta dhibcooyinka
3D Ciriiri Dheeraad ah dhibcaha, v. 1.2a Isku-dhajinta xajmiga 3
Fududeynta falanqaynta iyo maareynta moodooyinka casriga ah / tinarka casriga ah
Cohen's Kappa iyo Metrics Table Metrics 2.1a Qeybinta ku saleysan habka Cohen ee Kappa
Jihada Jihada Tilmaamaha Jihada Waxay dhalisaa khariidadaha jajab
Grid iyo Mawduuca Naqshadaynta, 3.1e Nidaamka Regression Isku-dhajinta laga bilaabo xajmiga dhibcaha
Shabakada iyo Mashruuca Mashruuca v. 2 Maareynta saadaasha mawduucyada iyo xawaaraha
Qalabka Wareejinta (Jenness Enterprises) v. 1.7 Qalab kala duwan oo isku dhafan oo lagu falanqeeyo kala duwanaanta kala duwan
Meelaha Mahalanobis Buugga Mahalanobis Siyaabo kala duwan oo loo sameeyo falanqaynta qiyaasta isticmaalka hababka Mahalobobeed
Meelaha Dhulka iyo Saamiyada laga bilaabo Grid Height Waxay abuurtaa dusha ka soo duuban
Qalabyada Dhulka loogu talagalay Dhibcaha, Xudduudaha iyo Wareegyada, v. 1.6a Waxay abuurtaa dusha meelaha iyo khadadka
Heerka Aqoonsiga Mawduuca (TPI) v. 1.3a Xisaabiyaa Mawduuca Mawduuca Mawduuc ee Shaxda iyo wuxuu abuuraa kheyraad cusub oo loogu talagalay falanqaynta shidaalka
ArcPress Exporter Ku dhoofinta ArcPress
Su'aalaha Dareenka ah, v. 1.4 Waxay bixisaa doorashooyin fiican oo loogu talagalay weydiimaha si loo kala saaro kiiska sare iyo kan hoose
Dheereeye dheeraad ah Hagaajinta sifooyinka si loo kordhiyo kordhinta
Soo hel Sawirrada Duubista ama Diiwaanada Raadi walxo iyo macluumaad isku dhafan
Qalabka Dirista Qadka, v. 2.1 Muujinaya jihada ay ku dhisantahay xariiqda
Qoraalka iyo Qalabka Dialog, v. 2.0015 Qalabka lagu dhiso wadahadal iyo code-code
Iska furfuro Wada-xaajoodyo, v. 1.8a Kala saaraa geeso isku dhejisan
Horumarinta Horumarinta - Dialog Waxay abuurtaa barmaameed oo muujinaya horumarka qaab-socodka
Ka saar dabeecadaha Z / M ee muuqaalada v. 1.1 Waxay u ogolaataa in la tirtiro sifooyinka Z iyo M ee walxaha
Qaybi Falanqaynta Dhex-dhexaadinta Hawlgallada leh tirooyinka faraha badan ee la xidhiidha isla diiwaanka
Xayeysiiya Shambefiles, v. 1.4 Walxaha kala soocida iyaga oo la wadaagaya diiwaano kala duwan
source: Ganacsiga Jenness
Post Previous«Previous Backgammon Online
Post Next Ugu Wanaagsan Shirka ManifoldNext »
26 Jawaab in "Extensions for ArcView 3x"
Gerardo Herrera M. isagu wuxuu leeyahay:
Miyaad fadlan ii sheegi kartaa xayeysiiska 3.2 kordhinta ee loogu talagalay abuurista qodobbada garabka ama sidoo kale haddii ay jiraan wax lagu kordhinayo si loo abuuro sanduuqa dhismaha, mahadsanid
mapipi10 isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan, macmacaan, ma i caawin kartaa fadlan? Ma jiraa fidin ama aalad qalab dhigaya dhibco badan masaafo isku mid ah midba midka kale ka kale? Waxaan haystaa shp of 10 kun oo dhibcood oo waxaan u baahanahay qof walba inuu ahaado mid masaafada u ah 1,5 mts midkiiba. Aad iyo aad baad u mahadsantahay hambalyo webka, waa mid wax tar leh.
Salaan, Waxaan ubaahanahay arji u ogolaanaya inaan dhoofiyo 3.3 khariidadaha xayeysiinta si aan u ogaado wax codsi ah. mahadsanid
Paul Ventura isagu wuxuu leeyahay:
Iga raali ahaw, waxan ku cusub ahay hadaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa kordhinta aan u isticmaali karo ka shaqeynta arcview 3.2. Waad arki doontaa inay iyagu horay ii rabeen oo waxaan arki karaa oo keliya inay dhahayaan qaar leh muuqaal laakiin ma ogi kuwa ay yihiin iyo sababta oo ah qaabaynta sababihii aan uga soo baxay barnaamijkii la yiri ee aniga ayaa igu kacaya, aad baad u mahadsantahay horaantii
Taasi waxay ahayd. Waad ku mahadsan tahay
Shakigaagu ma'aha sidaas cad, laakiin waa in lagu sameeyaa falanqaynta xalalka, ashyaa taabtay. Haddii ay isku dhuftaan, ka dib waxaad abuurtaa mid ka mid ah lakabyada unugyada ka dibna waxaad ka gudubtaa centroids-yadaas ka dhanka ah shirqoolada kale ee leh xaaladda miiska soo baxay ay ku jiraan xogta labada lakab.
Hello, waxaan u baahanahay inaan ku biiro laba jadwal, dhammaan xogtooda, laakiin ma haystaan ​​aqoonsi caadi ah, oo kaliya goobaha caanka ah ee ku yaal garoomada. Si aan u noqdo mid cad, waxaan haystaa qaababka is-dhex-galka iyo gobollada, waxaanan u baahanahay inaan ku soo biiro jadwalkooda si aan kuugu dhejiyo fariin-soo-saarka si habsami leh.
salaan ku mahadsan
Waxaad la xidhiidhi kartaa IDE ee SEGEPLAN, halkaas oo ay jiraan xog badan oo laga helo Guatemala oo la isticmaalo waxaadna isku xiri kartaa barnaamij kasta oo GIS ah oo taageera adeegyada OGC
Xaggee ayaan ka heli karaa caofotos ama khariidadaha Guatemala si ay ugu dhejiyaan barnaamijka
Hagaag, waxaan eegi doonaa inaan soo dhejino xiriirinta oo aan faallo ka bixinno. Ilaa iyo inta xiriirku uusan dhiirrigelin ku xadgudubka xuquuqda daabacaadda.
Arturo1000 isagu wuxuu leeyahay:
Hore ayaan u soo diray, wax kasta, aniga ila soo xiriir.
Dhibaato malahan, waxaan ku siin karnaa tixgalinta lagama maarmaanka ah. Ilaa iyo inta xiriirku xalaal yahay.
waxaad u diri kartaa tifaftirka waraaqaha (at) geofumadas.com
Hello, si aad u aragto, waxaan haystaa ururinta kordhinta Arc4You, oo leh wax aad u xiiso badan oo diyaar u ah in ay isticmaalaan waxyaabaha aan xaddidneyn; haddii qoraaga mawduucani uu xiiseynayo, waxaan ku aflaxayaa, kaliya deymaha, waa wax walba oo aan weydiisto. Waxaad iiga heli kartaa suxufi caan ah oo Argentine ah oo aan la yiraahdo arturo1000.
jiirka isagu wuxuu leeyahay:
fadlan iga caawi inaanan ku dhicin wax barbarasho leh GIS 3.2, markaad dooranaysid kala duwan .. wuxuu iga codsadey feylka mana garanayo. Haddii qof xalliyo dhibaatada, fadlan sheeg.
Waan ku hambalyeynayaa isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAD ADIGA KA BADAN KARAA WAQOOYIN IYO U SHAQEYN FURSADAHA AAD KA QAADATO IN AAD KA QAADAY
Waan ku qadarineynaa tabarrucyada aan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii uu qof iigu soo diri karo i soo diri karo ama u daabaci karo kordhin si uu ugu xiro Arcview 3.2 Google Earth 2010 mahadnaq
WILLIAM SANTOS isagu wuxuu leeyahay:
SHARCIYADA, WAXAAN KA HELI KARAA HADDII AAD HADDII QOF KA HELI KARAA ECW EE LA SOO JEEDA 3.2. KU SALAYSO IYO WAXAAD KA BEDI KARTAA WAXAAD SAMAYSAN, KA HELI KARTAA SHAQADA KALE EE AAD KA QABTO.
Daniela G isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay deeqsinimada
Carlos R isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin qalabkan, guud ahaan, hambalyo u ah Cartesia iyo Geofumadas.
Faylka 'prj' waa midka ay tahay inaad ku furto Arcview 3x ama aad ku soo gashid ArcGIS 9x. Faylkani wuxuu leeyahay qaab dhismeedka dhammaan waxyaabaha ku jira.
Mahadsanid, mahadsanid talada.
Waxaan ubaahanahay inaan furo furaha orthophoto laakiin faylalka ayaa ah kordhinta prj bdf sbn sbx.
Haddii aad i caawin karto waan kuu mahadcelinayaa.
Mahadsanid, mahadsanid aad u badan ee ku darsaday.
hello waa faahfaahin dheeraad ah oo xiiso leh, waxaan doorbidi lahaa wakhti kordhinta coordxy.avx iyo coordinates.avx
Dareen weyn oo ka mid ah kuwa isku kalsoon.
hello, u mahad naqashada faahfaahinta ay kuwani yihiin kuwo xiiso leh
Crosby isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan dib u eegay kordhinta, waa mid aad u qiime badan, ama waxa aan qabanayo shaqadayda